Craters of Moon ah .....
Su'aal Craters of Moon ah .....
1 sano 11 bilood ka hor #696 by PAYSON
Mid ka mid ah downloads muuqaal cusub, craters of Moon ah, waxaa aad u wanaagsan la sameeyey. Waxaan ku nool Idaho, kaliya 100 ama si miles ka ..... cajiib ah!!!! Haddii aad tahay xubin ka JUMBO ah oo ay leeyihiin meel ku wadid aad u adag, waxa ay isku dayaan. Waa gabi ahaanba u qalantaa. Haddii aanad lahayn xisaab JUMBO aad, waxa uu dhici karaa dajinta waqti aad u dheer. Laakiin, in u wada leexdeen, waa qabow.